Madaxweynaha Maamulka hirshabeele oo ka hadlay khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Jabuuti. • Horseed Media – Manchikoni
Home/World/Madaxweynaha Maamulka hirshabeele oo ka hadlay khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Jabuuti. • Horseed Media
Madaxweynaha Maamulka hirshabeele oo ka hadlay khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Jabuuti. • Horseed Media
August 4, 2018 – By: Mohamud Nadif
Maxamed Cabdi Waare Madaxweynaha Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeele waxaa uu sheegay in uu ka xun yahay xiisada siyaasadeed ee dhex aloosantay dawladaha jabuuti iyo soomaaliya, taasi oo timi ka dib markii madaxwaynaha jamhuuriyada federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu booqasho ku tagay dalka Eratheria.
"Xiisada ka dhalatay is bedelka ka socda Geeska Africa, aad ayay noo taabatay, waxaa la damqanay oo to la xumaanay calool xumada iyo niyad jabka galay walaalaheena reer Jabuuti, runtii Jabuuti taariikh ayay ku leedahay Soomaaliya iyo maamulkaan Hirshabeelle, waa dad deris nala ah walaalo isku dhiig to nahay, sideedaba abaalka in la gudo waayo, side ayaga abaalka to you galnay halgalnkii xornimada doonka u gudeen ayaa la rabaa in you gudno, side la socotaan tirada ciidamada qalabka page Jabuuti ay yihiin oo ay inta Ciidamo noo soo direen waa la qiyaasi karaa, howl galk aas walaaltinimo iyo dhiigga ay noo daadiyeen, iyo sama falka ay ka qeyb galaan fatahaadii Beledweyn ka dhacday iyo page dadka u soo badbaadiyeen, intaba waa aam muhiim ah in la ogaado "ayuu yiri Madaxweynaha Hirshabeelle oo waraysi siinayay idaacada VOA.
Waare ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee ka tirsan madaxda maamul goboleedyada oo ka hadla xiisada siyaasadeed ee soo kala dhex gashay dawladaha jabuuti iyo soomaaliya oo xirir qoto host oo ka dhaxeeyo.